IMozilla, iGoogle, iApple neMicrosoft bajoyina amabutho ukwenza izengezo | Kusuka kuLinux
Okuhle | 10/06/2021 18:04 | Izaziso
I-W3C imemezele Zimbalwa izinsuku ezedlule ukwakheka kweqembu lomphakathi elibizwa nge- "WebExtensions" (WECG) umsebenzi wayo omkhulu ukwenzangisebenza ngokubambisana nabahlinzeki besiphequluli namanye amaqembu anentshisekelo ukukhuthaza ipulatifomu yokuthuthukisa i-plugin Isiphequluli esijwayelekile esisuselwa ku-WebExtensions API.
Leli qembu elisebenzayo lifaka abamele i-Google, i-Mozilla, i-Apple ne-Microsoft kanye nemininingwane eyenziwe iqembu elisebenzayo ihlose ukwenza lula ukwakhiwa kwama-plugins ezisebenza kwiziphequluli ezahlukahlukene.
I-W3C ibalula ukuthi ihlela ukufeza le nhloso ngokuchaza imodeli ephelele kanye nokusebenza okuyisisekelo okuvamile, i-API kanye nesistimu yeziphathimandla, ngaphezu kweqiniso lokuthi iqembu elisebenzayo lizophinda lichaze ukwakhiwa okuhambisanayo ukwenza ngcono ukusebenza, ukuqinisa ezokuphepha nokuhlinzeka ukuvikelwa ukuhlukunyezwa.
Lapho wenza imininingwane, kuphakanyiswa ukunamathela ezimisweni ezisetshenziswe yi-W3C TAG (I-technical Architecture Group), njengokugxila komsebenzisi, ukusebenzisana, ukuphepha, ubumfihlo, ukuphatheka, ukugcinwa kalula, nokuziphatha okulindelekile.
La Iwebhusayithi yeWECG ithi inhloso yeqembu ukucacisa umnyombo ojwayelekile we-API, imodeli, nezimvume zokunwetshwa kwesiphequluli sewebhu, ithi:
Ngokucacisa ama-WebExtensions APIs, ukusebenza, nezimvume, singenza kube lula kakhulu kubathuthukisi bezandiso ukuthi bathuthukise ulwazi lomsebenzisi wokugcina, ngenkathi bezihambisa kuma-API athuthukisa ukusebenza futhi avimbele ukuhlukunyezwa.
Kuze kube manje, iqembu selidale indawo ezinikele yeGitHub futhi lahlanganisa ifayili le- umqulu womphakathi ukulungiselela umsebenzi owenziwayo ochazwa njengo:
Sisebenzisa imodeli yesandiso ekhona nama-API asekelwa yi-Chrome, Microsoft Edge, Firefox, ne-Safari njengesisekelo, sizoqala ukusebenza ngokucacisiwe. Inhloso yethu ukukhomba esivumelana ngakho, sisondeze ukuqaliswa, futhi sihlele inkambo yokuziphendukela kwemvelo okuzayo.
Ama-API wokuthuthukisa ama-plugin namamodeli asevele asetshenzisiwe ku-Chrome, Microsoft Edge, Firefox, nakuSafari azosetshenziswa njengesisekelo sama-specs akhiqiziwe. Iqembu elisebenzayo lizozama ukukhomba izici ezijwayelekile zazo zonke iziphequluli zokwenziwa kwe-plugin, zilethe ukuqaliswa kusondelane, futhi zichaze izindlela zokuthuthuka okungenzeka.
Encwadini yomsebenzi, bayasho lezi zimiso zokuklama ezilandelayo:
I-user-centric: izandiso zesiphequluli zivumela abasebenzisi ukuthi benze ngezifiso isipiliyoni sabo sokuphequlula iwebhu ngokuya ngokuncamelayo nezidingo zabo.
Ukuvumelana: gcina futhi uthuthukise ukuhambisana nezandiso ezikhona nama-API wesandiso adumile. Lokhu kuzovumela abathuthukisi ukuthi bangabhali kabusha ngokuphelele izandiso zabo ukuze basebenze kuziphequluli ezahlukahlukene, okungahle kube nephutha.
Rendimiento: Vumela onjiniyela ukuthi babhale izandiso ezingenawo umthelela omubi ekusebenzeni noma ekusetshenzisweni kwamandla kwamakhasi ewebhu noma kusiphequluli.
Ezokuphepha: Lapho ukhetha ukuthi iziphi izandiso ezizosetshenziswa, abasebenzisi akumele baxegise ukusebenza nokuphepha. Ngama-API wokunweba amasha, kuzokwenziwa ushintsho kumodeli.
Ubumfihlo: ngokufanayo, abasebenzisi akumele baxegise ukusebenza nobumfihlo. Njengoba iphuzu eliyinhloko kuzoba ukuthi izandiso zesiphequluli zithuthukisa ulwazi lomsebenzisi ngenkathi zidinga ukufinyelela okuncane okudingekile kudatha yokuphequlula yomsebenzisi ukunciphisa noma ukuqeda ukuhweba abasebenzisi okufanele bakwenze phakathi kokusebenza nemfihlo.
Ukuphatheka: Kufanele kube lula kubathuthukisi ukudlulisa izandiso kusuka kusiphequluli esisodwa kuya kwesinye, kanye neziphequluli ukusekela izandiso kumadivayisi ahlukahlukene nezinhlelo zokusebenza.
Ukugcinwa: Ngokwenza lula ama-API, lokhu kufanele kuvumele iqembu elibanzi lonjiniyela ukuthi lenze izandiso futhi lenze kube lula ngabo ukugcina izandiso abazidalayo.
Ukuzimela: abahlinzeki besiphequluli kufanele banikeze ukusebenza okuqondile kusiphequluli sakho futhi kufanele futhi babe nethuba lokuzama izici ezintsha.
I-W3C isho ngokusobala lokho akuhloselwe ukucacisa ngqo lokho onjiniyela abangakwazi futhi abangakwazi ukukwenza ngezandiso. Futhi ngeke zisho, zilinganise noma ziqondise ngokusayina noma ukulethwa kwezandiso. Bafuna nje ukukhuthaza izinto ezintsha ngenkathi begcina ubumfihlo nokuphepha komsebenzisi ngendlela efanayo ebhodini.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » IMozilla, iGoogle, iApple neMicrosoft zijoyina amabutho ukwenza izengezo zifane
ngamafuphi: ukuzimela okukhulu
INvidia neValve baletha i-DLSS, ubuchwepheshe obuvumela ama-gamers ukuthi athole ukusebenza okuningi ku-Linux